Ny Porn dia mifandray amin'ny fiakaran'ny heloka amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo | Valin'ny Fanamarinana
Home Lalàna Ny fiakaran'ny heloka amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo
Ny herisetra ara-piraisana ara-nofo dia eo amin'ny sehatra manan-tantara any Ekaosy izay hitateran'ny mpampanoa lalàna fa ny firaisana ara-nofo dia mifototra amin'ny 80% amin'ny trosan'ny raharaha ao amin'ny Fitsarana Ambony ao amin'ny Fitsarana.
Ny mpitsara ambony indrindra ao Angletera sy Wales, Ny Fitsarana Lehiben'ny Tompo, Lord Thomas avy ao Cwmgiedd, dia nilaza fa mihatra ny raharaha momba ny firaisana ara-nofo ary tsy azo hazavaina toy ny tranga manan-tantara. "Ny sasany amin'ireo sary pôrnôgrafia dia tsy nino ny zavatra asehony ary tsy isalasalana fa misy fiantraikany amin'ny olona izany." Na dia teo aza ny fiantraikan'izany fitaomana amin'ny mpitsara izany, dia azo ampiharina ihany koa ho an'ny vahoaka amin'ny ankapobeny izany. horonan-tsarimihetsika lahatsary mijery vola be.
Ity horonan-tsary ity dia mampiseho an'i Dave Thompson, ny Lehiben'ny polisy ao West Midlands, niatrika ny Komitin'ny raharaha momba ny raharaham-bahiny tamin'ny 25 Oktobra 2017. Miresaka momba ny hatairany noho ny fitaovam-pananahana hitan'ny tompon'andraikitra ao aminy any UK izy. ny tranonkala maizina. (Ny mahaleo tena, 28 segondra)
Ny pôrnôgrafia ara-dalàna dia orinasa lehibe lehibe. Ny fahazoana mora ny fidirana amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet miaraka amin'ny anarany tsy fantatra anarana dia nahatonga ny smartphone ho entam-barotra 'tsy maintsy manana' sy fitaovana fialamboly mora.
Bits-driaka bebe kokoa no mijery ny pôrnôgrafia amin'ny finday noho ny amin'ny ordinatera. Ny 62% an'ny ankizy taona 12-15 dia manana smartphones araka ny tatitra avy amin'ny OFNUMX Ofcom.
Ny fiantraikan'ny atidoha amin'ny fampiasana sary vetaveta amin'ny aterineto, indrindra amin'ny atin'ny tsy fahampian-jatovo, dia mety hiteraka fihetsika feno fihenjanana sy malefaka izay mety hitarika ho amin'ny firaisana ara-nofo.
Na dia tsy misy fametavetana ara-nofo aza, dia mety ho voaheloka heloka bevava iray ny olona iray. Ohatra, olo-malaza tanora iray, antsointsika hoe Bob, no voaheloka ho tompon'ny pôrnôgrafia noho ny isan'ny sary nokendreny tamin'ny findainy. Izy ireo dia sary nandefa azy tamin'ny alàlan'ny Facebook sy tambajotra sosialy hafa tamin'ny alàlan'ny ankizy zatovo zatovo. Na dia tsy nihaona tamin'ireo zazavavy ireo aza izy ireo, dia ampy ho azy irery ny fananany mba hohadihadiana.
Ny vokatry ny faharesen-dahatra amin'ny fametavetana firaisana ara-nofo toy ny fananana sary mamoafady ankizy dia azo antoka fa hanamarina ny firaisana ara-nofo. Inona no dikan'izany raha ny amin'ny olona toa an'i Bob?
Midika izany fa ho very ny mombamomba azy, asa be karama. Tsy afaka mahazo visa izy hitondra ny sipany amin'ny Disneyland any Etazonia na any ivelany any ivelany. Raha taty aoriana dia manana ny zanany izy ireo, dia ho eo ambany fanaraha-mason'ireo mpiasam-panjakana izy na dia efa lasa aza ny anarany avy amin'ny Sex Offenders Register. Izany rehetra izany dia noho ny tsy firaharahany ny lalàna ary angamba ny fahazoana tanora noho ny tombontsoan'ny olona maro manaiky, ny tanora tanora dia manapa-kevitra ny handray anjara amin'ny fiainan'ny olo-malaza.
Ny fampahafantarana ny tanora ny mahafantatra ireo loza ireo dia androany. Tsy hoe 'loza mitatao amin'ny olon-tsy fantatra' sy ny tahotra ny fitsangatsanganana an-tserasera izay tokony ho mailo amin'ny fiahiana ireo mpikarakara, fa ny loza ateraky ny zanak'izy ireo dia miteraka tsy fantany fotsiny fa manenjika fientanam-po amin'ny findainy, ary manao izay 'ataon'ireo olon-kafa' . Ny sary vetaveta amin'ny Internet dia misy fiantraikany amin'ny atidoha tsy mitovy amin'ny gazetiboky TV sy ny pôrnika sy DVD.
Tsy ara-dalàna ny fananana na fizarana sary mampiseho firaisana ara-nofo. Raha hitanao fa mijery ireo zavatra ireo ianao ary miahy azy, mifandraisa amin'ny fiantrana Atsaharo izao! Helpline na ny Lucy Faithfull Foundation. Na dia tsy mikasa ny hihaona amin'ny ankizy amin'ny fikasana hanao firaisana aza ianao, ny fananana sary fotsiny dia mety hitarika fitsidihan'ny polisy. Mifandraisa amin'ireto fikambanana mpanao asa soa ireto koa raha efa nanatona anao ny polisy.
<< Vetaveta mamaly faty Ny indostrian'ny pôrnôgrafia >>